Prairie Cardiovascular: Dhakhaatiirta Wadnaha ee Illinois & Ururka Caafimaadka Wadnaha
Abaalmarinta Prairie CARE
Sannadka In Review
Waa maxay sababta Prairie
Ku Arag Todoba
Shabakadda Xanuunka Xabadka
Degdeg wax u akhri
Daawaynta Gaarka ah
Cudurka Peripheral Artery
Rugaha xididdada varicose
Sheekooyinka La Wadaago
Hel Dhakhtar iyo APC
Booqasho muuqaal ah
Prairie Waxbarashada & Iskaashatada Cilmi-baarista
Booqashooyinka Xafiiska Virtual-ka ayaa hadda laga heli karaa Prairie Wadnaha - WAX DHEERI AH BARO
Maaskaro weji ayaa loo baahan yahay ballantaada
Xusuusnow inaad soo qaadato maaskaro wajiga ballanta!
Maaskaro ayaa weli looga baahan yahay dhammaan goobaha Wadnaha ee Prairie ee Illinois.
Cilmi baadhay La caddeeyey. Hogaamiye.
Khabiirada #1 wadne xanuunka
Ballantaada Qabso Hadda!
Xididada, Xididada Tag
micnela'aan ha ugu dhicin cudurka xididka!
Qaado Qiimaynta Caafimaadka Xididada
Ka Kormaridda Wadnahaaga.
Waa waxa aan halkan ku samayno.
Hel dhakhtarkaaga hadda!
Booqashooyinka Xafiiska Virtual hadda waxaa laga heli karaa Prairie Wadnaha
Inta lagu jiro xiisadda COVID-19, Prairie Wadnaha wadnaha wuxuu ku faraxsan yahay inuu bixiyo isla maalinta iyo maalinta ku xigta booqashooyin muuqaal ah oo loogu talagalay badbaadada iyo ku habboonaanta bukaannadayada.
Si aad ballan u qabsato, fadlan wac
Raadi dhakhtarka Prairie
Hadda raadi dhakhtarka wadnaha Prairie
Balamo isku Maalin ah iyo Maalmo Xiga Ayaa La Heli Karaa
Hogaamiyaasha Daryeelka Wadnaha
Marka aad u baahan tahay wax ka badan takhtar, marka aad u baahan tahay takhtar ku taqasusay wadnaha, Prairie Heart ayaa leh jawaabta. Laga soo bilaabo kolestaroolka sarreeya ilaa cadaadiska dhiigga oo sarreeya, aneurysms ilaa arrhythmia, xanuunka laabta ilaa daryeelka wadnaha, khubarada Prairie Heart waxay diyaar u yihiin inay garab istaagaan inta aad u socoto safarkaaga wadne caafimaad qaba.
JADWALKA BALLANTAADA HADDA
Buuxi foomka hoose.
Prairie Cardiovascular waa hogaamiye heer qaran ah oo bixiya daryeel heersare ah oo tayo sare leh, heer-sare ah oo wadnaha ah iyo daryeelka xididdada dhiigga. Ballan la samaynta Dhakhaatiirteena heerka caalami ah iyo APCs ma fududayn karto.
Halkaan ACCESS Prairie barnaamijka, codsigaaga ballan waxa si ammaan ah loogu soo diray kooxdayada kalkaaliyayaasha caafimaadka wadnaha ee aadka u tababaran. Waxay ku siin doonaan caawimo khaas ah markaad ballan la samaysato Dhakhaatiir iyo APC oo ku habboon in lagu daweeyo wadnahaaga gaarka ah iyo baahiyaha xididdada dhiigga.
Kadib buuxinta foomka, e-mail sugan ayaa loo soo diri doonaa kooxdayada ACCESS Prairie kalkaalisooyin Waxaad heli doontaa wicitaan soo celin ah 2 maalmood oo shaqo gudahood.
Haddii aad dareento in tani ay tahay xaalad degdeg ah, fadlan wac 911.
Markaad buuxiso foomka, waxaad ogolaatay inaad isgaarsiinta ka hesho Prairie Heart.
Waxaan ahay bukaan cusub.
Taariikhda Dhalashada * MM123456789101112 / DD12345678910111213141516171819202122232425262728293031 / SSSS2022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926192519241923192219211920
Nambarka Telefoonka lala xidhiidhi karo *
Dhakhtarka la door biday iyo APC (ikhtiyaar)
Goobta la door biday (ikhtiyaar)
Sababta aad u codsanayso ballan *
Ama na soo wac
Haddi aad door bidayso in aad qof toos ah ula hadasho, kalkaalisada waxa lagula xidhiidhi karaa marka la garaaco 217-757-6120.
Sheekooyinka ayaa nagu dhiirigeliya. Sheekooyinku waxay naga caawiyaan inaan dareemo xidhiidhka dadka kale. Sheekooyinku waa qayb ka mid ah wax nafteena ka weyn. Qalbigooda, sheekadu waxay naga caawiyaan bogsashada. Waxaan ku martiqaadeynaa qof walba inuu akhriyo sheekooyinka hoose oo aan ku dhiirigelino bukaanadayada iyo qoysaskooda inay wadaagaan sheekadooda gaarka ah ee Prairie.
Gacmaha Kaliya Tababarka CPR
Markii Steve Pace uu ku dhacay dabaqa, xaaskiisa Carmen ayaa wacday 9-1-1 waxayna isla markiiba bilowday cadaadis laabta ah. Ma aysan hubin in ay isticmaalayso farsamada saxda ah, laakiin dhakhaatiirta, kalkaaliyayaasha caafimaadka iyo jawaabayaasha ugu horeeya waxay isku raaceen in ficilkeeda degdega ah ay badbaadisay nolosha Steve, isaga oo sii nooleynaya ilaa uu ambalaasku yimaado.
Waxaa dhiirigeliyay sheekada fikirka degdega ah ee Carmen, kooxda Machadka Wadnaha ee Prairie waxay bilaabeen tababbarka "ilaalinta xawliga - Gacmaha Kaliya CPR" si ay u keenaan farsamo nolol badbaadineed oo sahlan bulshada.
Gacmaha Kaliya CPR ayaa waxaa kula taliya Ururka Wadnaha ee Mareykanka dadka u taagan ee aan ku tababarin CPR. Waxa kale oo lagu taliyaa xaaladaha marka samatabbixiye aanu awoodin ama aanu doonayn inuu bixiyo hawo afka iyo afka ah.
Si aad u daawato muuqaalka Pace, si aad wax badan u barato ama aad u codsato fadhiga CPR Hands Only ee bulshadaada, fadlan badhanka hoose.
Defibrillator-ka Wadnaha La-maqaadi karo ee Ka Baxa Dhiiga Xididdada (EV ICD), Dhiig-karka Wadnaha wadnaha
Jitters shaqo cusub waa caadi. Laakin qiyaas in aad shaqo cusub ku bilaabayso qalab sameeye cusub - kii ugu horeeyay Maraykanka iyo kan labaad ee aduunka oo dhan lagu beero iyada oo la isticmaalayo tignoolajiyada baadhitaanka si loogu daweeyo garaaca wadnaha ee khatarta ah [...]
Beddelaadda Ventilant Aortic
Waxaan rabay in aan wax yar qaato oo aan ku idhaahdo MAHADSANID kooxda TAVR!!! Waxay ahaayeen kuwo aad ugu fiican heerar aad u badan! Dhammaantood waxay bilaabeen bishii Abriil 2013. Soddoggeyga macaan, Billy V. Williams, ayaa miyir beelay, waxaana markii dambe loo sheegay inay xiriir la leedahay qalbigiisa. Tijaabooyin badan ka dib, go'aamo ayaa soo baxay […]
CABG, Kateeteraynta wadnaha, Laab xanuun
Waxaan aabahay waayay Febraayo 4, 2017, isaga oo 5 maalmood uun ka xishooday dhalashadiisii ​​89aad. Yaraantii waxaan aabahay u arki jiray mid aan laga adkaan karin. Wuxuu ahaa ilaaliye, nolosheyda macalinka, geesigayga!! Markii aan qaangaaray, waxaan ogaaday inuusan mar walba ag joogin, laakiin waan ogaa ilaa iyo inta uu kan socday […]
Waxaan nahay halabuurayaal
Waxa ugu dambeeya ee aad u baahan tahay waa qalliin u baahan waqti dheer oo soo kabasho ah. Prairie Heart, waxaanu ku takhasusay hal-abuur cusub, qalliino aan badnayn oo aan kaliya helin shaqada, laakiin sidoo kale kugu soo celinaysa inaad noqoto mid ka dhaqso badan hababka dhaqanka.
Wax badan baro oo hel cunto karisyo
Daryeelka u dhow gurigaaga
Waxaa noo barakeysan inaan ku noolnahay gobol leh bulshooyin xooggan oo aan ku dareemo raaxo iyo qanacsanaan. Laakin marka aan qabno dhibaato wadne oo laga yaabo in ay u baahdaan daryeel gaar ah, badanaa waxay la macno tahay in aan wajaheyno doorashada ka tagista bulshadeena ama ka sii daran, joojinta daryeelka. Tani maahan xaalad marka daryeelkaaga gaarka ah ay bixiyaan dhakhaatiirta wadnaha ee Prairie. Falsafadayada Machadka Wadnaha ee Prairie waa in aan bixino daryeelka ugu badan ee suurtogalka ah gudaha gudaha. Haddii taasi aysan suurtagal ahayn, ka dibna kaliya, ayaa lagu talinayaa in la safro.
Hel Dhakhtar iyo APC Agtaada
Marka laga soo tago ku dhawaad ​​40 goobood oo agagaarka Illinois ah halkaas oo dhakhaatiirta wadnaha ee Prairie ay ku arkaan bukaanada ku jira goob cisbitaal maxalli ah, waxaa jira barnaamijyo khaas ah Springfield, O'Fallon, Carbondale, Decatur, Effingham iyo Mattoon.
Haddii aad isku aragto calaamadaha wadno-qabadka, garaaca ha wadin.
Fadlan wac 911 oo sug caawimaad.
garaac, ha wadin
Sannadkan oo keliya, 1.2 milyan oo Maraykan ah ayaa la kulmi doona xaalad degdeg ah oo wadnaha ah. Nasiib darro, qiyaastii saddex meelood meel bukaannadan ayaa dhiman doona ka hor inta aysan gaarin isbitaalka hal sabab oo muhiim ah - dib u dhac ku yimaada helitaanka daawaynta muhiimka ah.
MARKA XANUUNKA XANUUNKA LAABKU DHACDO, XAQIIQO - MAR WALBA garaac, waligaa ha wadin.
Bukaanno aad u badan oo wadno-xanuunsan ayaa iskood u kexeeya ama qof qoyskiisu u kaxeeyo cisbitaalka. Mahadsanid, waxaa jirta hab lagu caawinayo dhimista tirakoobyadan ba'an. "Waa Waqti Ku Saabsan" waa barnaamij ay soo saartay Shabakadda Xanuunka Xabadka ee Prairie Heart Institute of Illinois (PHII), isku xirka isbitaallada iyo wakaaladaha EMS ee daryeelka ugu dhaqsaha badan uguna wanaagsan bukaannada xanuunka laabta. Had iyo jeer wac 911 si aad u hesho gargaar caafimaad - waligaa ha wadin - marka calaamadaha digniinta wadne xanuunka ay dhacaan.
Markaad la kulanto calaamadaha wadno-qabadka, ilbiriqsi kasta oo aad badbaadiso waxay la macno tahay farqiga u dhexeeya dhaawaca wadnaha ee aan dib loo celin karin ama xaalad la daweyn karo, iyo xitaa nolol ama dhimasho. Markaad garaacdo 911 marka hore, daawaynta waxay bilaabmaysaa marka ay gurmadayaashu yimaadaan. Xirfadlayaasha EMS iyo jawaabayaasha kale ee ugu horreeya waxay awoodaan:
Si degdeg ah u qiimee xaaladdaada
Isla markiiba u gudbi macluumaadkaaga muhiimka ah iyo macluumaadka EKG cosbitaal kasta oo ku dhex yaal Shabakadda Xanuunka Laabta ee PHII
Ku daawayn ambalaansada
Hubi in kooxda wadnaha ee isbitaalka ay sugi doonaan oo ay diyaar u yihiin imaatinkaada
Si wax ku ool ah u dedejiya wakhtiga laga bilaabo calaamada wadno xanuunka ilaa daawaynta
Talooyinka Diyaarinta Booqashadaada
Hubi inaan hayno diiwaankaaga caafimaad
Haddii dhakhtarkaaga gaarka ahi kuu soo gudbiyo wadnaha wadnaha ee Prairie, isaga/iyada ayaa nagula soo xidhiidhi doona telefoon ama waxay kuu soo diri doonaan xogtaada xafiiskayaga. Aad bay muhiim u tahay inaan helno diiwaannadaada caafimaad. Haddii kale, takhtarka wadnahaagu ma awoodi doono inuu si ku filan kuu qiimeeyo waxaana laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in dib loo dhigo ballantaada ilaa laga helayo diiwaannadaas. Haddii aad adigu isu soo gudbisay, waa inaad la xiriirtaa dhakhtarkaaga oo aad diyaarisaa in diiwaannadaada loo soo diro xafiiskayaga ka hor booqashadaada ballanta ah. Taariikhdaagii hore ee caafimaadka ayaa lama huraan u ah ogaanshaha iyo daawaynta.
Keen dhammaan macluumaadkaaga caymiska iyo shatiga darawalnimadaada
Markaad ballan nala samayso, waxaa lagu waydiin doonaa macluumaadkaaga caymiska oo anaga aanu xaqiijin doono ka hor ballantaada. Waa inaad keentaa kaadhkaaga caymiska iyo shatiga darawalnimada ballantaada kowaad. Waxaad wax badan oo ku saabsan siyaasaddayada maaliyadeed ka heli kartaa adigoo wacaya Waaxda Maaliyadda Bukaanka.
Keen Dhammaan Daawooyinkaaga
Fadlan la soo qaado dhammaan daawooyinkaaga weelkooda asalka ah marka aad timaado xafiiska. Hubi in dhakhtarkaagu og yahay daroogo kasta oo aad qaadanayso, oo ay ku jiraan dawooyinka aan farmashiyaha laga qorin iyo daawooyinka dhirta sidoo kale. Hal daawo ayaa laga yaabaa inay la falgasho mid kale, xaaladaha qaarkood waxay abuurtaa dhibaatooyin caafimaad oo halis ah. Waxaad heli kartaa foom fudud oo aad ku taxdo dhammaan daawooyinkaaga halkan.
Buuxi Foomamka Macluumaadka Bukaanka Cusub
Macluumaadkani waa mid aad muhiim u ah oo soo dadajin doona nidaamka markaad timaado xafiiska. Nuqullada foomamkaaga ayaa laga heli karaa hoosta. Waxaad foomamka fakis ugu diri kartaa xafiiskayaga ka hor 833-776-3635. Haddii aadan daabicin karin foomamka, fadlan kala soo wac xafiiskayaga 217-788-0706 oo weydiiso in foomamka laguu soo diro. Buuxinta/ama daawashada foomamka ballantaada ka hor waxay kaa badbaadin doontaa wakhti.
Xaashida Tilmaamaha Ogolaanshaha
Imtixaankaaga: waxa laga filayo
Ka dib marka aad buuxiso diiwaangelintaada oo uu diiwangeliyaha haysto macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed iyo macluumaadka caymiska lagama maarmaanka ah, kalkaalisada ayaa ku celin doonta qolka baarista halkaas oo isaga ama iyadu ay qaadi doonaan cadaadiska dhiiggaaga iyo garaaca wadnahaaga.
Kalkaalisadu waxay sidoo kale qaadan doontaa taariikhdaada caafimaad si ay u ogaato ma aha oo kaliya daawooyinka aad qaadanayso laakiin waxa, haddii ay jiraan, xasaasiyad aad yeelan karto; Waa maxay nooca jirrooyinka ama dhaawacyada hore ee laga yaabo inaad soo gaartay; iyo wax kasta oo qalliin ama cusbitaal laga yaabo in lagugu sameeyo.
Waxa kale oo lagu waydiin doonaa wax ku saabsan caafimaadka qoyskaaga oo ay ku jiraan xaalad kasta oo la iska dhaxlo oo la xidhiidha caafimaadka wadnahaaga. Ugu dambeyntii, waxaa lagu weydiin doonaa xaaladdaada guur, shaqada iyo inaad isticmaasho tubaako, khamri ama daroogo iyo haddii kale. Waxa laga yaabaa inay ku caawiso inaad qorto dhammaan dhacdooyinkaaga caafimaad iyo taariikhaha oo ay tan ku keento booqashadaada.
Marka kalkaalisada dhameysato, takhtarka wadnaha ayaa kula kulmi doona si uu u eego taariikhdaada caafimaad oo uu u sameeyo baaritaan jireed. Imtixaanka ka dib, isaga ama iyada waxay kala hadli doonaan natiijooyinkiisa adiga iyo qoyskaaga waxayna kugula talin doonaan baaritaan ama qorshe daaweyn kale. Fadlan xor u noqo inaad waydiiso dhakhtarka wadnaha wixii su'aalo ah ee aad wakhtigan qabtid. Dhakhaatiirteenu waxay ka faa'iidaystaan ​​Caawinta Dhakhaatiirta iyo Xirfadlayaasha Kalkaalisada kuwaas oo si gaar ah ugu tababbaran maaraynta wadnaha iyo xididdada si ay u arkaan bukaanada marmar. Haddi ay arintu sidaas tahay, booqashadaada waxa dib u eegi doona dhakhtarkaaga.
Maxaa dhacaya Booqashada Koowaad kadib?
Ka dib booqashadaada dhakhtarka wadnaha, xafiiskayagu wuxuu u gudbin doonaa dhammaan diiwaanada wadnaha, natiijooyinka baaritaanka, iyo talooyinka daaweynta dhakhtarkaaga tixraacaya. Xaaladaha qaarkood, waxaa laga yaabaa inaan ballan u dhigno baaritaanno dheeraad ah oo aad u baahan doonto inaad u soo noqoto. Waxaan haynaa imtixaano iyo habab kala duwan — qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaan ahayn kuwo fara-ku-taallo ah - oo aynaan haysan xitaa 10 sano ka hor si ay nooga caawiyaan inaan tilmaamno dhibaatooyinka oo aan si degdeg ah wax uga qabanno, ka hor dhacdo kasta oo wadnaha ah.
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan wac kalkaalisada wadnahaaga. Tiradayada wicitaanada maalinlaha ah awgeed, isku day kasta ayaa la samayn doonaa in lagu soo celiyo wacitaankaaga si sax ah. Wicitaan kasta oo la helo ka dib 4:00 galabnimo waxaa caadi ahaan la soo celin doonaa maalinta shaqada ee soo socota.
Caawinta Guud Ayaa La Heli Karaa
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto booqashadaada soo socota, fadlan la xidhiidh.
Codsiga sii deynta macluumaadka ama diiwaannada
Habka Waaxda Adeecida oo dhan codsiyada siideynta macluumaadka bukaanka. Si looga caawiyo bukaanada helida macluumaadka daryeelka caafimaadka gaarka ah (nuqullada adag ee diiwaanada caafimaadka), bukaanadu waa inay si fiican u buuxiyaan La-taliyayaasha Wadnaha ee Prairie Ogolaanshaha Isticmaalka iyo/ama Shaacinta Foomka Macluumaadka La Ilaaliyo.
Dhammaan foomamka oggolaanshaha ee la buuxiyay, saxeexan iyo taariikhda ku jira waxaa lagu soo celin karaa:
Attn: Waaxda u hoggaansanaanta
AMA iimayl: HIPAA2@prairieheart.com
AMA si toos ah fakis ugu dir Waaxda Adeecida: 833-776-3635
Ogolaanshaha Isticmaalka iyo/ama Shaacinta Macluumaadka La Ilaaliyo
Xaashida shahaado qaraabo la oggolaaday
Waa maxay khidmadaha la xidhiidha codsashada diiwaannada caafimaadka?
PCC ayaa qabta ma biilasha bukaanka, xarumaha kale ee daryeelka caafimaadka, Dhakhaatiirta iyo APCs, ama Waaxda Maamulka Arrimaha Veterans (VAA) si ay u codsadaan koobiyada diiwaanada caafimaadka bukaanka.
Sideen ku helaa koobiyada diiwaanka caafimaadkayga?
Oggolaanshaha Isticmaalka/Baahinta Macluumaadka Caafimaadka Dhawrsan waa in uu saxeexo bukaanka ama wakiilka bukaanka.
Si aad u hesho Ogolaanshaha Isticmaalka/Shaacinta Foomka Macluumaadka Caafimaadka Dhawrsan guji halkan.
Fadlan guji halkan si loo helo tilmaamo ku saabsan sida loo dhamaystiro Ogolaanshaha Isticmaalka/Baahinta Macluumaadka Caafimaadka Dhawrsan.
Haddii aadan awoodin inaad daabacdo foomka, fadlan nala soo xiriir iyada oo loo marayo macluumaadka xiriirka.
Marka oggolaanshaha la dhammaystiro, saxeexo iyo taariikhda ay hesho Waaxda Adeecida, macluumaadka la codsaday waxa loo diri doonaa qaataha.
Goorma ayay oggolaantu dhacaysaa?
Oggolaanshaha wuxuu dhacayaa 60 maalmood ka dib taariikhda la saxiixo. Waxaad geli kartaa taariikh ka duwan cutubka saddexaad ee bogga labaad haddii aad u baahan tahay in oggolaanshaha uu jiro in ka badan 60 maalmood. Oggolaanshaha ma shaqeyn doono wakhti kasta oo ka badan hal sano.
Halkee baan ku diraa oggolaanshahayga oo dhammaystiran?
Fadlan u dir dhammaan oggolaanshaha:
Fiiro gaar ah: Waaxda u hoggaansanaanta
Waa maxay lambarka faakiska ee lagu diri karo oggolaanshahayga oo dhammaystiran?
Fadlan fakiskaaga ku soo dir 833-776-3635.
Ma iimayl ku soo diri karaa oggolaanshahayga oo dhammaystiran?
Haa Oggolaanshaha la dhammeeyay waxaa lagu soo diri karaa emayl HIPAA2@prairieheart.com
Maxaan u baahanahay si aan u helo diiwaannada caafimaadka bukaanka dhintay?
Macluumaadka caafimaadka qofka dhintay waxaa lagu sii dayn karaa codsi qoraal ah oo ka yimaadda fuliyaha ama maamulaha hantida qofka dhintay ama wakiilka uu magacaabay marxuumku.
Maxaa dhacaya haddii uusan jirin wakiil u ah qofka dhintay?
Haddii aysan jirin fulin, maamule, ama wakiil oo qofku uusan si gaar ah u diidin in lagu shaaciyo diiwaankiisa ama qoraalkeeda caafimaadka qofka dhintay waxaa laga yaabaa in la siidaayo marka la helo foomkan: Foomka Shahaadaynta Qaraabada ee la oggolaaday
Intee in le'eg ayay qaadanaysaa in aan helo diiwaankayga caafimaad?
Siideynta diiwaanka caafimaadka, waxay qaadan kartaa ilaa 30 maalmood in la helo xogtaada. Codsiyada waxaan u diyaarinaa sida ay u kala horeeyaan. Si kastaba ha ahaatee, ballamaha soo socda, nidaamyada, iyo xaaladaha degdegga ah waxaa loo habeeyaa codsi STAT ahaan.
Waxaa laga yaabaa inaan awoodno inaan ka baaraandegno codsiga isla maalintaas, marka la eego shaqaaleysiinta iyo macluumaadka ayaa dhammaystiran oo la heli karaa. Waxaad la xidhiidhi kartaa Waaxda Adeecida si aad u hubiso heerka codsigaaga.
Yaa ka shaqeeya siideynta diiwaanka caafimaadkayga?
Waaxda Hoggaaminta waxay habaysaa dhammaan codsiyada diiwaanka.
Ma saxiixi karaa foom oggolaansho oo ma qaadan karaa diiwaannada caafimaadka isku mar?
Fadlan la xidhiidh Waaxda Adeecida si aad u habayso habaynta diiwaanka caafimaadka, wakhtiga qaadista, iyo si aad u saxeexdo ogolaanshaha. Waaxda u hoggaansanaantu waxay u baahan doontaa wakhti ku filan si ay codsiga uga baaraandegto oo ay hubiso in siidaynta saxda ah ee habraacyada macluumaadka bukaanka la dhammaystiro.
Qof aan bukaanka ahayn ma qaadi karaa diiwaankayga caafimaad?
Haa, diiwaanada waxaa loo sii dayn karaa qof kasta oo bukaanku ku caddeeyo oggolaanshaha. Aqoonsiga sawirka ayaa loo baahan yahay marka la qaadayo diiwaannada caafimaadka.
Ma isticmaali karaa codsi isku mid ah si aan u diro diiwaanno meelo kala duwan?
Maya. Waxaan u baahanahay ogolaansho gaar ah goob kasta.
Miyaan u baahanahay oggolaansho gaar ah dhakhtar kasta oo PCC ah?
Maya, PCC waxa ay leedahay hal diiwaan oo caafimaad oo elegtaroonig ah. Dhammaan diiwaannadaada caafimaad waxay ku yaalliin hal jaantus.
Waa maxay sababta ogolaanshaha ay u tahay mid qoraal ah oo leh taariikhda saxiixa?
Si loo xaqiijiyo oggolaanshaha bukaanka inuu sii daayo macluumaadka caafimaadka.
Haddii aan soo dejiyo Machadka Wadnaha ee Prairie ee Illinois APP taleefankayga ama tablet-kayga ama aan iska diiwaangeliyo warsidahaaga, sidee u isticmaashaa macluumaadkayga?
Kama soo ururinno wax macluumaad shakhsi ah Prairie Heart App. Macluumaadka aad geliso waxa lagu kaydiyaa oo keliya teleefankaaga ama qalabka gacanta oo laguma ururiyo ama laguma kaydiyo Prairie Cardiovascular ama Prairie Heart Institute of Illinois sinaba. Haddii aad doorato warsidahayaga, kaliya ciwaanka emailkaaga ayaa loo kaydiyay ujeedada laguugu soo dirayo warsidaha. Prairie Cardiovascular iyo Machadka Wadnaha ee Prairie ee Illinois weligood ma iibin doonaan ciwaankaaga iimaylka waxaadna ka bixi kartaa wakhti kasta.
Soo deji App-ka Prairie
App-ka machadka wadnaha ee Prairie waxa uu fududeeyaa in lagu xidho. Markaad taabato badhanka, raadso dhakhtarka wadnaha ee Prairie ama keen tilmaamo goobta wadnaha Prairie ee kuugu dhow. App-ka dhexdiisa, qaybta kaadhka boorsada dhijitaalka ah ee "MyPrairie" waxay kuu ogolaanaysaa inaad kaydiso dhammaan macluumaadka dhakhtarkaaga, daawooyinkaaga, xasaasiyadaha, macluumaadka caymiska iyo xidhiidhka farmashiyaha.
U soo daji iPhone
U Soo Degso Wixii Android ah
Ogeysiiska Takoorka La'aanta: English
Kaalmada Luuqadda: Deitsch | Deutsch | Español | Français | Hoob | Italiano | polski | Tagalog | SomGoal rss | Русский | اُردُ | العربية | हिंदी | ພາ ສາ ລາວ | 한국어 | 繁體 中文
Prairie Cardiovascular waa takhtar iyo APC daryeelka caafimaadka wadnaha iyo xididada iyo daawaynta ee meelo badan oo ku yaala bartamaha Illinois. Ururkayagu waxa uu bixiyaa dhakhaatiirta wadnaha ee ugu fiican gobolka, oo leh saxnaanta qalliinka caanka ah iyo talada xirfadeed ee walaacyada la xiriira wadnaha. Waxaan tijaabineynaa oo aan caafimaad ahaan u daaweynaa dhammaan calaamadaha caadiga ah ee wadnaha sida xanuunka laabta, dhiig karka, dhiig karka, gunuuska, garaaca wadnaha, kolestaroolka sare, iyo cudur. Waxaan leenahay dhowr goobood oo ay ku jiraan magaalooyinka waaweyn sida Decatur, Carbondale, O'Fallon, iyo Springfield.
Barnaamijka Kaalmada Dhaqaale ee HSHS
© 2020 Prairie Cardiovascular - Dhakhaatiirta Prairie